Zanateny - Wikipedia
Ny zanateny dia teny tsy azo sarahina amin'ny namany ka tsy afaka mahaleo tena sady atao hilazana ny anjara asan'ny teny hafa na natao hampifandraisana teny roa hafa ao anaty tarika na fehezankevitra na fehezanteny. Ny mifanohitra aminy dia ny reniteny izay teny afaka mahaleo tena. Maro ny sokajin-janateny amin'ny fiteny iray, dia ny mpampitohy, ny mpampiankina, ny mpisolo, ny mpamaritra (tsy isany ny mpamari-toetra), ny mpanoritra, sns. Miovaova arakaraka ny fiteny sy ny hevitry ny mpahay teny ny lisitry ny sokajin-tenin'ny zanateny.
Miavaka amin'ny reniteny ny zanateny noho izy ireo voafetra isa, sarotra miforona, miasa matetika kokoa ary manana hevitra tsy mazava tsara ny ankamaroany, tsy azo soloana amin'ny mpisolo, matetika izy ireo teny fohy, tokana anjara asa ary mifangaro amin'ny anjara asany idraindray ny anarany.
1 Ny mpanoritra
2 Ny zanateny mpamaritra
3 Ny mpisolo
4 Ny mpampitohy
5 Ny mpampiakina
6 Ny kianteny
Ny mpanoritra dia teny akambana indrindraindrindra amin'ny anarana mba hahatonga ity farany ho azo ampiasaina anaty fehezanteny ka hahalalana na fantatra na tsia, na efa noresahina na tsia, na efa azo eritreritra na tsia, ny zavatra tondroina amin'io anarana io. Ny mpanoritra dia ampiasaina koa mba hanehoana fa singan-javatra manokana na sokajin-javatra ankapobeny no tondroina amin'ilay teny ikambanany.
Tsy ny fiteny rehetra no manana mpanoritra sady miovaova ny isan'ny zana-tsokajin'ny mpanoritra arakaraka ny fiteny.
Ny zanateny mpamaritraHanova
Ny zanateny mpamaritra dia teny akambana amin'ny anarana ao amin'ny tarika iray ahafahana mampiasa io anarana io anaty fehezanteny ka mety miaraka amin'ny fanondroana ny kilahivavy, ny lahara-mpandray anjara am-pehezanteny, ny filaza isa sns izy. Isan'ny zanateny mpamaritra ny mpamaritra isa, ny mpamaritra manondro, ny mpamaritra manontany, ny mpamaritra mampifandray, ny mpamaritra tompon-javatra.
Ny mpisolo dia teny maka ny toeran'ny anarana na ny tarika anarana na ny fehezankevitra na fehezanteny iray manontolo koa. Isan'ny sokajin'ny mpisolo ny mpiso lotena, ny mpisolo manondro, ny mpisolo manontany, ny mpisolo mampifandray, ny mpisolo tompon-javatra, sns.
Ny mpampitohy dia teny mampifandray teny na andian-teny roa na maro ao amin'ny andian-teny lehibe kokoa na ny fehezankevitra na ny fehezanteny iray. Misy karazany roa ny mpampitohy dia ny mpampitohy teny sy ny mpampitohy fehezankevitra. Ny mpampitohy teny dia teny enti-mampitohy teny na andian-teny roa na maromaro mitovy anjara asa (sady matetika mitovy sokajy) ao amin'ny andian-teny lehibe kokoa na fehezanteny na ny fehezankevitra. Ny mpampitohy fehezankevitra, izay teny tsy natao hampitohy afa-tsy fehezankevitra ka milaza ny fifampiakinana misy eo amin'ireo fehezankevitra ireo, dia atao hoe mpampiankina fehezankevitra.
Ny mpampiankina dia teny na andian-teny fohy izay ampiasaina hampifandraisana teny na fehezankevitra roa mba hanehoana ny fifampiankinan'izy ireo ara-pifehezan-teny sy ara-keviteny nefa izy ireo tsy mitovy anjara asa. Ny teny na fehezankevitra ampidirin'ny mpampiakina dia matetika mitana anjara asa fameno milaza antony na vokany na tanjona na fepetra sns. Raha teny no ampiraisina amin'ny alalan'ny mpampiankina dia atao hoe mpampiankin-teny ilay mpampiankina, fa raha fehezankevitra kosa dia atao hoe mpampiankina fehezankevitra ilay mpampiankina.
Ny kianteny dia teny kely tsy miova endrika manana anjara asa tsy mitovy amin'ny an'ny tambinteny na ny mpampiankina na ny mpampitohy. Ny fiteny tsirairay dia samy manana ny kianteniny ary ny mpahay teny tsirairay dia samy manana ny zavatra ao amin'ny fiteny iray izay ataony hoe kianteny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zanateny&oldid=972069"
Dernière modification le 10 Jolay 2019, à 10:51
Voaova farany tamin'ny 10 Jolay 2019 amin'ny 10:51 ity pejy ity.